Maraakiibta caalamiga ah - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Maraakiibtayada caalamiga ah waxaa ka mid ah dhammaan cashuuraha, khidmadaha iyo cashuuraha, oo ay ku jiraan VAT. Wax kale kuma lahaan doontid markii amarkaaga la keeno.
Waxaan caalami ahaan u rarnaa FedEx Priority International (2-6 Maalmo) heerarkeenuna aad ayuu u hooseeya. Qiimayaashu waxay ku saleysan yihiin halka aad ku nooshahay iyo cabirka iyo miisaanka waxa aad dalbaneyso.
Haddii aad isticmaasho xamuul gudbiyaha, fadlan faham in mar haddii xirmo la geeyo xamuul gudbiyaha, waxaa loo tixgeliyaa in la keenay xitaa haddii gudbiyaha uu lumiyo sheyga. Dhibaatooyinka ugu badan waxay laxiriiraan xamuulleyda xamuulka luminta, maaraynta iyo waxyeelada shixnadaha. Waxay u dhacdaa si isdaba joog ah oo aan hadda keenayno.
Waxa kale oo jira xaddidaadyo xaddidan oo khuseeya gudbinta xamuulka, oo saameynaya sida qaybaha beddelka loogu soo diro adiga, oo aan ku khusaynin markaad isticmaasho xulashadayada maraakiibta caalamiga ah. Akhriso kaayaga bogga damaanad qaadka ah wixii faahfaahin dheeraad ah.